အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်မဖြစ် စောစောစီးစီး သိစေဖို့ရည်ရွယ်လျက် ..... ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်မဖြစ် စောစောစီးစီး သိစေဖို့ရည်ရွယ်လျက် .....
ဗိုက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အစာအိမ် နဲ့ အူလမ်းကြောင်း ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်း ( Upper GastroIntestinal Tract & Lower GastroIntestinal Tract ) ဆိဲုပြီး အပိုင်းကြီး ၂ ပိုင်း ခွဲခြားထားပါတယ် ။ အူမကြီး( Colon) နဲ့စအို( Rectum) တို့ ဟာ Lower GI ထဲမှာ ပါ ပါတယ် ။ Ascending , Transverse , Descending ,Sigmoid colon ဆို ပြီး အူမကြီးရဲ့နေရာ ပုံသဏ္ဍန်ကိုလိုက်ပြီး အမည်နာမ တွေ ထပ် ခွဲခြား ထားပါသေးတယ် ။
အူလမ်းကြောင်းရဲ့ တာဝန်များမှာ -
• အစာအိမ်ထဲတွင်ှ ချေဖျက်ပေးလိုက်သည့် အစားအစာများမှ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် လိုအပ်သည့် အဟာရ များကို သွေးကြောများအတွင်းသို့ ရောက်အောင် စုပ်ယူ ပြီး ပို့ဆောင်ပေးခြင်း
• မလိုအပ်ပဲ ကျန်နေသော စုပ်ယူခြင်း မပြုလုပ်နိူင်သည့် အစာဟောင်းများအား မစင် ၊ အညစ် အကြေးအဖြစ် စအို မှ တဆင့် စွန့် ထုတ် ပေးခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အူမကြီးကင်ဆာတွင် တွေ့ ရှိရသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ
• အစပိုင်းတွင် သိသာထင်ရှားမှု မရှိ သောကြောင့် ရောဂါ ကို စောလျှင်စွာ ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။
• အောက်ပါ လက္ခဏာများ ရှိနေပြီဆိုလျှင် အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးရန့် လိုအပ်ပါသည်။
1. ဝမ်းသွားနေကျ အလေ့အထ ပြောင်းလဲ လာခြင်း
2. ရက်သတ္တပါတ် များစွာ သွားသည့် ဝမ်း မှာ မာခြင်း၊ ပျော့ခြင်း ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ဖြစ်ခြင်း
3. ဝမ်းသွားရာတွင် သွေးစသွေးန များ ပါလာာခြင်း
4. ဗိုက်ရစ်ပြီး ၊ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာ လေထိုးလေနာလိုမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။(၄)-ဝမ်းသွားပြီးပေမဲ့အကုန်မစင်ပဲ ကျန်နေသလိုမျိုး ခံစားရခြင်း
5. တကိုယ်လုံး အားမရှိသလို နုံး ပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
6. အကြောင်း မရှိပဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အလေးချိန် လျော့ နည်းလာခြင်း၊ တဖြေးဖြေး ပိန်ချုံးလာခြင်း
အူမကြီးကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသူများ
• အသက်၅၀ ကျော်ပြီး သွေးသားအရင်းအခြာ ထဲတွင် ရောဂါ ဖြစ်သူရှိသူများ
• အစားအသောက်တွင် အသားချည်း အဓိကစားသူများ
• အမျှင်များသည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် high fiber diet စားလေ့ စားထ မရှိသူများ
အူမကြီးကင်ဆာ အတွက် အထောက်အကူပြုသော်လည်း တတ် ကျွှမ်းနားလည်သည့် ဆရာဝန် နှင့် သေချာ စမ်းသပ် ဆွေးနွေးပြီးမှ အသုံးပြုသင့်သော် ဆေးများ
• ဆဲလီနီယမ် (Selenium)
• သွေးနီဥ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သော ဖေါလစ်အက်စစ်(Folic Acid)
• အက်စ်ပရင်လိုမျိုး အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး( aspirin-like painkillers )
• ဟော်မုန်း ကုသမှု တချို့(hormone replacement therapy) များ
အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားစေသည့် အကြောင်းရင်းများ
• အဓိက အကြောင်းရင်းကို သေချာရှင်းလင်းစွာ မသိကြသေးပါ။
• အူမကြီးနဲ့စအို အတွင်းနံရံတွေမှာ ပေါ်လာလေ့ ရှိသည့် မှိုပွင့် ပုံစံ အသားပိုအလုံး (Polyps) များ ကြောင့် အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ အကြို ကင်ဆာ အသားလုံးလို့( precancerous cells (polyps) on the inside lining of the colon ) လည်း ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
• အချို့ ဆိုလျှင့် အဖုလုံးလေး အနေနှင့် ထွက်ပေါ်မလာပဲ အူနံရံ မျက်နှာပြင်အတိုင်း တပြေးတည်း ပြားနေ တတ်သဖြင့် သိသာမူ မရှိခြင်းများ ရှိပါသည်။
• မျိုးရိုးလိုက်ပြီး မျိုးရိုးဗီဇဆဲလ်များ ပြောင်းလဲ သွားမှု (Inherited gene mutations ) ကြောင့် လည်း ဖြစ်စေတတ်သော်လည်း ရာခိုင်နှုန်းတော့နဲပါသည်။ အောက်ပါ အတိုင်း ၂မျိုး ရှိပါသည်။
o (က)- Familial adenomatous polyposis (FAP). မျိုးရိုးလိုက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်သည့် အသားပိုလုံးလေး ဖြစ်ပါသည်။ အသက် ၄၀ မတိုင်မီ မှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါသည်။
o (ခ) - Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) အသားပိုလုံး ထွက်ပေါ်ခြင်း မျိုးရိုးလိုက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်သည့် အူမ ကင်ဆာ ဖြစ်ပြီး အခြားကင်ဆာများ (ကျောက်ကပ် ၊အသည်း၊ အစာအိမ်၊ သားအိမ်၊ ဥအိမ် ကင်ဆာ) များနှင့့် တွဲဖက်ပြီးတွေ့ ရတတ် သဖြင့့် Lynch syndrome ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် Crohn's disease, ulcerative colitis ဟု ခေါ် ဆိုသော အူမကြီး အနာဖြစ်ပြီး ယောင်ရမ်း ခြင်း ရောဂါ ရှိခဲ့ဖူးသူ များမှာ လည်း ကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ။ မိဘမျိုးရိုး (မိဘ နှင့် မောင်နှမ ရင်းချာ များ) အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးသူ ရှိပါက အထူးသတိထား သင့်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်အဝလွန်သူ၊ လှုပ်ရှားသွားလာမှု နည်းပါးသူ ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူ ၊ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အရက်သောက်သူ၊ အခြားကင်ဆာကြောင့် ဝမ်းဗိုက်မှာ ဓါတ်ကင်ကုသမှု ခံယူခဲ့ ဖူးသူ အစ ရှိသူများတွင် အူမကြီးကင်ဆာ ပိုမို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
အူမကြီးကင်ဆာ အတွက် မည်ကဲ့သို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
ရောဂါကို စောစီးစွာ သိရပြီး လိုအပ်သည့် အချိန်မီ ကုသမှုများ ရယူနိုင်ရန် ပုံမှန် စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ှ
o Barium Enema ခေါ် ဆိုသည့် ဆေးသွင်းပြီးဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
o CT Scan ရိုက်ခြင်း
o Ultrasound ဖြင့် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်း
o Tumor marker အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် သွေးတချို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အချို့ကင်ဆာ များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ သွေးရည်ကြည်ထဲ တွင် ပါဝင်သည့်Carcinoembryonic antigen (CEA) ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်နေခြင်း ရှိ မရှိ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
o အခြားသော သွေးစစ်ခြင်းများ အနေနှင့် CA 19-9 , AFP, Galactosyl Transferase II , ဓါတ်များကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်လည်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ သွေးစစ်ခြင်းမှ ရရှိသော အဖြေများသည် အခြားသော ကင်ဆာများ ဖြစ်ကြသည့် အသည်း၊ အစာအိမ် ၊ သရက်ရွက်၊ သားအိမ်၊ ဥအိမ် ၊ အဆုပ် အစရှိသည့် နေရာများမှာလည်း ပုံမှန် ထက် များပြား နေတတ်ပါသည်။
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ အနုအရင့် (Stages )
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ အနုအရင့် (Stages ) အဆင့်များပေါ် မူတည်ပြီး ရောဂါကုသမှု နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု များ ကွာခြားပါသည်။ အနာရှိရင် ဆေးသိတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း အချိန်လွန်ပြီး ရောဂါကျွမ်း မှ ကုသမှု ခံယူမူ ပြုလျှင်အောင်မြင်မှု နည်းပါးမည် ဖြစ်သည်။
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ ရောဂါကို အကြမ်းဖြင်း အားဖြင့် ခွဲထားပုံမှာ-
3. Stage II(A,B)
4. Stage III(A,B,C)
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ အား မည်ကဲ့သို့ကုသမလဲ
o အူမကြီးကင်ဆာမှာ ဆေးထိုး၊ ဆေးစားရုံနှင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် အဓိက ကျသည့်ကုသမှု မှာ့ ခွဲစိပ်ကုသခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
o ရောဂါ နုစဉ် စောလျှင်စွာ သိရှိကာ ခွဲစိပ်မှု ခံယူနိုင်လျှင် များသောအားဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
o ခွဲစိပ်ရာတွင် ရောဂါပြန့်ပွားနေသည့် ကင်ဆာအကြိတ်အား အတတ်နိုင်ဆုံး ခွဲစိတ် ဖြတ်တောက်ပြီး ကျန်ရှိနေသည့် အူမကြီး အပိုင်း နောက်တွင် ယာယီ သို့ မဟုတ် အမြဲတမ်းသုံး နိုင်ရန် မစင်စွန့်ပေါက် ကိုပါ တည်ဆောက်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
o နောက်အဆင့် အနေနှင့် Chemotherapy ခေါ် ကင်ဆာဆေးများသွင်းပြီး ကုသခြင်း၊ Radiotherapy ခေါ် အဏုမြူ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးပြီးကုသခြင်း များအား ခွဲစိပ်မှု အပြီးတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ် ပေးရပါသည်။ အချိန်လွန် နောက်ကျပြီးမှ သိရှိရပြီး ခွဲစိပ်ကုသနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ ပါက ဤကဲ့သို့ ဆေးသွင်းခြင်း၊ ဓါတ်ကင်ခြင်း များသာ ပြုလုပ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
အူမကြီးကင်ဆာရောဂါ မှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
MOMO Pharmacy Myanmar Team